Ny mpikaroka sinoa dia mamolavola aerogel karbonofotsy matanjaka superelastic | Jrain
Nahazo aingam-panahy ny fahamailinana sy ny hamafin'ny tranokala an-tranon-jaza voajanahary, ekipa mpikaroka notarihan'i Prof. YU Shuhong avy ao amin'ny University of Science and Technology of China (USTC) hamolavola fomba tsotra sy ankapobeny hamolavola ireo aerogel karbonika mahery vaika sy havizanana miaraka amin'ny nanofibrous rafitry ny tambajotra amin'ny alàlan'ny fampiasana resincinol-formaldehyde ho loharano karbona mafy.
Tato am-polony taona vitsy lasa izay dia misy aerogel karbonika nozahana miezinezina amin'ny alàlan'ny fampiasana karbônaly grika sy karbonina malefaka, izay mampiseho tombony amin'ny superelasticity. Ireo aerogel elastika ireo dia matetika manana mikrostrostra malefaka amin'ny halavan'ny havizanana, fa ny herin'ny ultralow. Ny karbona mafy dia mampiseho tombony lehibe amin'ny tanjaky mekanika sy ny fitoniana ara-drafitra noho ny rafitra sp3 C-induced turbostratic "house-of-cards". Na izany aza, ny fikamafisana sy ny marefo dia miharihary amin'ny fomba hahatratrarana ny superelasticity miaraka amin'ny karbona mafy. Hatramin'izao dia mbola fanamby ny mamolavola aerogel vita amin'ny karbonina mahery vaika mahery.
Ny fanodinana ny monomers resin dia natomboka tamin'ny fisian'ny nanofibra ho toy ny mazoto rafi-drafitra mba hanomanana hydrogel amin'ny tambajotra nanofibrous, narahin'ny fanamasinana sy ny pyrolysis mba hahazoana airgel karbonika mafy. Mandritra ny polymerization, ny monomers dia mametra-pandrindrana ary manantona ireo tadin'ny fibre-fibre, ka mamela tranokala tamba-jotra miaraka amin'ny tonon-taolana matanjaka. Ankoatr'izay, ny fananana ara-batana (toy ny diametin'ny nanofiber, ny haben'ny aerogel ary ny fananana mekanika) dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny fametahana modely fotsiny ary ny habetsaky ny akora.
Noho ny nanofibona karbonika mafy sy ny fantsom-pahazavana be dia be eo amin'ireo nanofibers, ny aerogel mahery vaika dia mampiseho fampisehoana mekanika mahery vaika sy maharitra, ao anatin'izany ny super-elasticity, ny tanjaka avo, ny hafainganam-pandehanana haingana be (860 mm s-1) ary ny kojakoja famoahan-kery ambany ( <0.16). Rehefa avy nosedraina ambany fihenam-bidy 50% ho an'ny fihodinana 104, ny fantsom-pamokarana karbônina dia maneho afa-tsy plastika vita amin'ny plastika 2%, ary hitazona ny fihenjanana amin'ny 93%.
Ny rivotra fantsona mahery vaika dia afaka mitazona ny super-elastika amin'ny toe-javatra henjana, toy ny azota ranoka. Miorina amin'ny fananana mekanika mahavariana, ity fantsom-pifandraisana mahery vaika ity dia nampanantena fa hampihatra ireo sensor sensor izay misy fihenjanana avo sy be mpanara-maso (50 KPa), ary toy ny conducteur mety mamatotra na miondrika. Io fomba fiasa io dia manome toky fa haitatra mba hanao fanatanterahana miaraka tsy misy karbonina nanofibra ary manome fomba fampanantenana hanovana ireo fitaovana matevina ho fitaovana elastika na azo ampiharina amin'ny alàlan'ny famolavolana mikrostrostra nanofibrous.
Nohavaozina Fiberglass, Mamatotra fanamafisana FRP, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, hamolavola, Famolavola grating, Masinina fanamafisana GRP,